महिना दिनमै देउवा सरकार ढाल्न रा'तारात मैदानमा उत्रिए ओली, ओली पक्षकै नेताले गरे यस्तो खु'लाशा !! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Public 24Khabar
Home News महिना दिनमै देउवा सरकार ढाल्न रा’तारात मैदानमा उत्रिए ओली, ओली पक्षकै नेताले...
महिना दिनमै देउवा सरकार ढाल्न रा’तारात मैदानमा उत्रिए ओली, ओली पक्षकै नेताले गरे यस्तो खु’लाशा !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
भनिन्छ, सिद्धान्तबिनाको राजनीति र नैतिकताबिनाको व्यापार काम लाग्दैन। तर मानव जातिको पाँच हजार वर्षको इतिहासमा मानिसलाई जुन चिजले सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको छ, त्यो हो वाद वा सिद्धान्त। समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद, फाँसीवाद, गान्धीवाद।
मानिसलाई वादहरूले सबैभन्दा बढी पीडित र अशान्त बनाएका छन्। मानव इतिहासमा जति पनि युद्ध भएका छन्, जति पनि हिंसा भएका छन्, ती सबै वादहरूकै वरिपरि घटित छन्। वादहरू फेरिँदै गएका छन् तर नयाँवादले पुरानो रोगको ठाउँ लिइरहेका छन्।
मानिस पनि त्यसैलाई सत्य ठानी मुर्दा बोक्नेले कुम फेरेजस्तै वाद फेरिरहेको छ, सिद्धान्त फेरिरहेको छ। मानौं सिद्धान्तबाहिर जीवन नै छैन।
सन् १९१७ देखि रुसमा पुरानावादहरू सबै समाप्त भए। पुराना देवीदेवताहरू विदावारी भए। तर नयाँ देवीदेवताहरू जन्मिए। नयाँ धर्म जन्मियोे। अहिले त्यहाँको क्रेम्लिन मक्का मदिनाभन्दा के कम छ र ? त्यो नयाँ तीर्थ हो, जहाँ पूजाका फूल चढाउन संसारका साम्यवादीहरू भेला हुन्छन्। मूर्तिहरू हटे, जिजसका गिर्जाघरहरू हराए।
तर लेनिनका मूर्तिहरूक्रेम्लिनको चौबाटोमा राखिएको छ। त्यसको पनि पूजा हुने गर्छ, समाजवादी तरिकाले। हामी जति जति वाद थोपर्छौं, उति नै मानिसको चेतना मर्दछ। वादको जति ठूलो रूपरेखा हुन्छ, त्यति नै मानिसभित्रको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। वादले मानिसलाई चेतनाशून्य बनाइदिन्छ।
हरेक कुराको व्याख्या हामीभित्र थोपरिएको विचारको साँघुरो घेराभित्र हुन्छ।नयाँ चिन्तनका लागि खाली दिमाग हुनुपर्छ। भरिएको दिमागले नयाँ सोच्नै सक्दैन। हामीले त्यसै दिन हाम्रो स्वतन्त्रता र व्यक्तित्व गुमाइसकेका हुन्छौं, जुन दिन कुनै विचारका रूपरेखाले हामीलाई चारैतिरबाट अठ्याउँछन्।
फलामका कारागार त देखिन्छन् तर विचारका कारागार देखिँदैनन्। अनि जुन कारागार त्यति देखिँदैनन् ती त्यति नै खतरनाक हुन्छन्। हामीयी नदेखिने कारागारका कैदी हौं।
Previous articleप्रह’रीको असईले अदा’लत भित्रै कर्मचारी महिलाको ह, त्या गरेर यस्तो ठाउमा फालेका रहेछन….
Next articleहे भगवान् ! २० बर्षिय यी युवकको फो क्सो नै छैन ,मु टुमा यस्तो स मस्या ,कठै (हेर्नुस् भिडियो )